Dutchtown ရပ်ကွက်အတွင်းရှိသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများ• DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Dutchtown Neighborhood ရှိသန့်ရှင်းရေး
Dutchtown ကိုလှပအောင်ထိန်းသိမ်းရန်သင်ရှာဖွေနေပါသလား။ ငါတို့မကြာခဏရရှိပါသည် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအခွင့်အလမ်းများ ထိုအပေါ် Dutchtown ပြက္ခဒိန်! ရပ်ကွက်ဥယျာဉ်ခြံလုပ်ငန်းနှင့်အခြားအရာများမှာသင်၏အမျိုးအစားဖြစ်လျှင်ဒတ်ခ်ျတောင်းတွင်လာမည့်ရပ်ကွက်သန့်ရှင်းရေးများကိုခြေရာခံရန်ဤစာမျက်နှာကိုအမှတ်အသားပြုပါ။
“ KIC” သည်ဘောလုံးခေတ်သစ်နှင့်ရပ်ရွာလူထုပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုပိတ်လိုက်သည် Marquette ပန်းခြံ! မနက်ခင်းမှာသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ပန်းခြံနဲ့ Dutchtown ရပ်ကွက်တဝိုက်မှာမင်းရဲ့အိမ်နီးနားချင်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပါ။ ထို့နောက်ကွင်းပြင်၌ချစ်ကြည်ရေးဘောလုံးပွဲများကိုစောင့်ကြည့်ပါ ဖူဆယ်ကွင်း နေ့လည်ခင်းမှာ။
နံနက် ၉ နာရီတွင်ပန်းခြံတွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ ကိရိယာများ၊ အစားအစာနှင့်အချိုရည်များနှင့်တီရှပ်များ (ပစ္စည်းများကုန်ဆုံးနေစဉ်) Marquette ပတ် ၀ န်းကျင်မှအမှိုက်များ၊ ပေါင်းပင်များနှင့်အခြားမကြည်လင်သောမြင်ကွင်းများအားနှိမ်နင်းရန်ပန်းခြံနှင့်အနီးအနားတစ်ဝိုက်သို့ ဦး တည်ပါမည်။
အိမ်မှသင်ကူညီနိုင်သည်၊ သင်၏အိမ်ရှေ့နှင့်နောက်ဖေးများကိုရှင်းလင်းပါ၊ သင်၏လမ်းကြား၌အမှိုက်သရိုက်ကိုကောက်ပါ၊ ပေါင်းပင်များနှင့်ချုံများကိုပြန်ဖြတ်ပါ၊ သို့မဟုတ်သင်၏အိမ်နှင့်သင်၏အပင်ကိုပေါက်စေသောအခြားနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေပါ။
နေ့လယ်မှ စတင်၍ ဘောလုံးကစားသူများကိုအားပေးရန် ၀ န်းရံပါ။ Dutchtown နှင့်ဒေသတစ်ဝှမ်းမှကစားသမားများသည် Louisiana တစ်လျှောက်အဓိကကွင်းနှင့် Virginia နှင့် Gasconade ရှိဖူဆယ်ကွင်းသစ်တွင်သူတို့၏စွမ်းရည်များကိုပြသလိမ့်မည်။
အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၂၄ နှစ်ကြားအိမ်နီးချင်းများသည်အပြင်ထွက်ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းရေးကြိုးပမ်းမှုများကိုကူညီခြင်းဖြင့်တစ်နာရီ ၁၀ ဒေါ်လာရနိုင်သည်။ အီးမေးလ် kicslouis@gmail.com ၊ သို့မဟုတ်ခေါ်ဆိုခ (314) 265-6186 မှတ်ပုံတင်ရန်။ ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
သန့်ရှင်းပါစေ Sponsors များ
ဤပွဲသည်စုပေါင်းကြိုးပမ်းမှုဖြစ်သည် Dutchtown ပင်မလမ်းများ နှင့် ဆလပ်မရ။ နောက်ထပ်လူထုမိတ်ဖက်များလည်းပါဝင်သည် Dutchtown အကြမ်းဖက်မှုကိုကုသပါ, Dutchtown တောင်အဝန်းကော်ပိုရေးရှင်း, Garcia Properties ကို, Gurung စျေး, လာလီဂါတွင် Latino Americana, Lou Fusz Ford, လူသာရင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့, စိန့်ဂျိုးဇက်အိမ်ရာစီမံကိန်း, စိန့် Louligans, Umoja စိန့်လူးဝစ်ဘောလုံးနှင့် Vitendo4အာဖရိက.
အိမ်ရာနှင့်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေး ဦး စီးဌာနနှင့်စိန့်လူးဝစ်လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံခန့်ခွဲမှုမြို့တော်တို့မှ Community Development Block Grant ရန်ပုံငွေများခွဲဝေပေးခြင်းအားဖြင့်ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကိုထောက်ပံ့သည်။
စိန့်လူးဝစ် Brightside သင်၏သန့်ရှင်းရေးအတွက်အမှိုက်အိတ်များ၊ လက်အိတ်များနှင့်ကိရိယာများကိုရနိုင်သည်။ အွန်လိုင်းဖောင်ပုံစံကိုဖြည့်ပါ or တစ်ခုထုတ် print ထုတ်ပါ သင့်ရဲ့ cleanup ပစ္စည်းများကြိုတင်မှာကြားထားရန်။
DutchtownSTL.org သည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်သင်၏သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဆောင်ချက်နှင့်ပတ်သက်သောစကားလုံးများကိုထုတ်ဖော်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ Facebook က, Instagram ကိုနှင့် တွစ်တာ။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအတွက်သင်၏နယ်မြေကိုစည်းရုံးနိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောလက်ကမ်းကြော်ငြာဒီဇိုင်းများကိုလည်းပေးနိုင်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန် သင့်ရဲ့သန့်ရှင်းရေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြရန်။